Iindawo zokutyela ezisemgangathweni eAndorra naseSpain | Ukuhamba kwe-Absolut
Iindawo zokuhlala ze-ski ezilungileyo kwiAndorra naseSpain
Emva kokuphela kwehlobo, lixesha lokuba sicinge ngeendlela zethu ezilandelayo. Ke, phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zamathuba akhoyo lukhetho lwe Chitha iintsuku ezimbalwa ukonwabela ikhephu nokuskiya kwizikhululo ezahlukeneyo eAndorra okanye eSpain.
Njengoko akusoloko kulula ukuxelela ngesikhululo esithile, apha ngezantsi uya kuba nakho ukwazi ezinye zeendawo zokutyela ezisemgangathweni kule mimandla.
2 UBaqueira Beret
Indawo yokupaka i-Grandvalira yahlukile kwabanye ngokuba eyona inkulu kuzo zonke iPyrenees. Ifunyenwe kwiNqununu yaseAndorra, kungoku nje ineekhilomitha ezingama-200 zamathambeka okuskiya. Olunye lweempawu eziphambili zesikhululo sesi Ingcali kwi-alpine skiingUmdlalo oquka ukuhla komkhondo kwelona xesha lide, ukulandelela indlela ethe kratya. Ungafumana eyona ilungileyo Iindawo zokuya eAndorra ngeEsquiades.com.
Amaculo kwiBaqueira Beret
IBaqueira Beret, ukuba kunokwenzeka, enye yezona ndawo zidumileyo zokutyela ekhephini eSpainKuba iqulethwe yindimbane yabantu abadumileyo, phakathi kwayo uKumkani uFelipe VI ubalasele. Esi sikhululo sinenani elikhulu leetrekhi ezilungiselelwe ukulungelelaniswa kumanqanaba ahlukeneyo abatyeleli. Ezi ngoma zanda ngaphezu kwe-155 yeekhilomitha. Ifumaneka kwiArán Valley, kwiiCatalan zasePyrenees, ukuyindwendwela ungathatha ithuba lokuyonwabela imihlaba emihle kunye nokutya okumnandi kwale ndawo.
Isikhululo esisemthethweni sine Amathambeka okuskiya angama-97 adibanisa ukuya kuthi ga kwiikhilomitha ezili-157. Esi sikhululo sineendawo ezimbini zekhephu, ezimbini zokubhoda kunye nomkhondo wekhephu. Esi sakhiwo sikwabonelela nangezinye iinkonzo ezinje ngokutyibilika kwiskiya okanye ukukhwela ihashe. Olunye lweempawu ezahlukileyo zeFormigal kukuba yabelana ngokudlula kwesksi kunye nesikhululo sePanticosa, ke ngekhe ukuskiya kwizikhululo ezibini kuphela kodwa ukhululeke nakwi-spa ebekwe kule yokugqibela. Isikhululo esisemthethweni sikwiphondo laseHuesca.
Ifumaneka kwingingqi yaseCerdaña, eCatalonia, isikhululo saseLa Molina sincinci ngobukhulu, kodwa hayi ngenxa yeso sizathu somgangatho osezantsi. Ngokupheleleyo, iiholide zinamathambeka angama-54 aqokelela iikhilomitha ezingama-61 zokubaleka. Isikhululo saseLa Molina saziwa kwihlabathi liphela ngokubamba inani elifanelekileyo Iziganeko zamanye amazwe kwihlabathi lokuskiya. Phakathi kweenkonzo zayo kunokwenzeka ukuba ufumane ukukhwela imoto yokuhamba, ukuhamba ngeqhwa kunye nokukhwela kwe-sled, phakathi kwabanye.
Indawo yokutyibilika kwiskii eSierra Nevada yaziwa ngokuba yenye yezona ndawo zintle zokuchithela eSpeyin. Kwiminyaka yakutshanje, isikhululo siphume sodwa Inkqubo ebanzi ejolise ebantwaneni. Ngale ndlela, indawo yokuhlala yaseSierra Nevada ineethambeka eliyilelwe ukuziqhelanisa neyona ndlu incinci endlwini, kunye nepaki ye-adventure equka izinto ezinomtsalane ezinje nge-roller coaster kunye neekhephu. En Esquiades.com Ungazifumana zonke izibonelelo zesikhululo seSierra Nevada kunye nezinye ezininzi ezibekwe eSpain, Andorra naseFrance.
Isikhululo seCerler sesona sikhululo siphakamileyo kwii-Aragonese Pyrenees. Ifumaneka kwiBenasque Valley, uCerler wahlukile kwabanye kuba ijikelezwe ziindawo ezintle kunye neencopho eziphakamileyo. Ngokufanayo, isikhululo seCerler sinaso amathambeka amakhulu inokufumaneka kule ndawo, iphakathi kwe-1.500 kunye ne-2.700 yeemitha. Esi sakhiwo sineekhilomitha ezingama-79 zamathambeka okuskiya, enzelwe izidanga ezahlukileyo zokufunda.
Umgangatho wekhephu yenye yezona zinto zibalulekileyo kwiholide yeBoi-Taül. Ifumaneka kwiphondo laseLleida, isikhululo sinenani elikhulu leembaleki ezibomvu, ke uninzi lwezinto ezinzima zikhona yenzelwe skiers zamanqanaba aphakathi kunye aphezulu, hayi eyabantu abaqala ukuskiya. Esi sikhululo sinendawo ebekelwe indawo yokupaka ikhephu, eyaziwa ngokuba yi "freeXperience". Kwakhona, enye into elungileyo kwisikhululo seBoi-Taül kukuba ihlala ingaxinananga kakhulu ngabantu.
Esi sikhululo simi embindini weAragon Valley, ngakumbi kumasipala waseJaca. Ubunzima bunenani elikhulu leenkonzo zokutyela kunye neekhilomitha ezingama-50 zamathambeka e-ski. Ngenxa yendawo ekuyo, iAustún ski resort idibanisa imidlalo kunye nezokhenketho kunye nokuzonwabisa. Ngale ndlela, ukubalekela e-Astún kunokubandakanya amanyathelo ngamanyathelo ahamba ngaphezulu kweskiya..
EAndorra, iVallnord ski resort ikwizithili zeArcalís kunye neLa Massana. Iindlela zayo ezingaphezu kwama-68 zizonke ziikhilomitha ezingama-93, zigcwele i ikhephu ekumgangatho ophezulu, Kuqinisekiswe ngendawo yesikhululo. Esi sakhiwo sinepaki yebhayisekile yabathandi beebhayisikile ezisezintabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iindawo zokuhlala ze-ski ezilungileyo kwiAndorra naseSpain
Yintoni ongayibona kwilizwe laseBasque: Ukusuka kwiMidlalo yeTrone ukuya kwi-flysch eyaziwayo